Toerana fisakafoanana sy fisotroana
Tsiro sy tsiro
Sakafo sy zava-pisotro any Kildare
Miroborobo ny kolontsaina sakafo sy fisotroan'i Kildare. Miaraka amin'ny trano fisakafoanana, fisotroana, gastropub, labiera kely ary kafe, dia mametraka ny tenany ho iray amin'ireo toerana itadiavana sakafo mahaliana any Irlandy ny distrika.
Ireo toerana tsidihinao dia afaka mitantara tantara mahaliana toy ny sakafo ihany. Ao Kildare, ny fitsangatsanganana iray dia mety ahitana Irlandey iray manontolo avy amin'ny cafe kely mangina, trondro ary sombin-tsakafo avy amin'ny bistro sisin-drano, fisakafoanana an-trano ao an-tsompitra skandinavia, na piknik gourmet ao an-tokotanin'ny trano mimanda. Ary ny hariva, indrindra any amin'ny tanànantsika sy vohitra misy anao, dia afaka mitondra anao na aiza na aiza amin'ny fisotroana oyster mankamin'ny trano fisakafoanana misy kintana Michelin, trano fandraisam-bahiny, trano fisotroana mafana, na toeran-tsakaizam-pianakaviana manatrika ny lakandrano. Aza adino ny mankafy zava-pisotro misy alikaola - na roa — eny an-dalana.
Ity misy hevitra iray: atsaharo ny famakiana momba an'io fanomezana tsy mampino rehetra io, ary mankanesa aty ary andramo ho anao.
VOTE: Kildare's Carvery tsara indrindra
Kildare dia manadio ny mari-pankasitrahana amin'ny Restaurant
Kildare Restaurant notolorana ny 'Restaurant of the Year'
Torohevitra momba ny fahavaratra